Warshadda Shiinaha Car Jack iyo soosaarayaasha | Xinrun
1. Qaab dhismeedka maqaaska maqaska
Waxay ka kooban tahay saldhig, labo gacmood oo taageer hoose ah, labo gacmood oo taageerta sare ah, koorsooyin, wiishka diyaaradda, lowska, gogol-xaar, usheeda dhexe pin. Cidhifyada labada gacmood ee taageerta sare ayaa gudaha loogu rogay xoog adayg, dhammaadkoodana waxaa loo sameeyaa geeryo iyo laalaab; cidhifyada labada gacmood ee taageerada hoose ayaa dib loogu rogaa feeraha xoojiya, dhammaadkuna waxay u samaysan yihiin giraangiraha giraanta oo kala baxa.
Mabda 'jack scissor jack
Jack scissor wuxuu ku saleysan yahay mabda'a joomatari ee ah in labada dhexda ee saddexagalka isosceles aysan isbadalin oo gaabiyo geeska hoose uu kicin doono khadka sare. Waxay isticmaashaa ul fiiqda iyo lowska si ay ula qabsadaan cidhifka hoose ee saddexagalka isosceles sare iyo hoose si kor loogu qaado loona dhimo joogga Sida jaranjarada qalabka ee nolosha caadiga ah, marka xagasha u dhexeysa labada gacmood ee sallaanku ay kayartahay, jaranjarada ayaa kor usii kacaysa. Sidoo kale, xagalka u dhexeeya labada gacmood ee sallaanku, sallaanku wuu hooseeyaa. Scissor jack, oo sidoo kale loo yaqaan 'bracket jack', waa mid fudud oo dhakhso leh, waana badeecad ku xidhan gaadhiga wershadaha waaweyn ee baabuurta ee Shiinaha. Nooca korantada ayaa ka kooban usha taageerta sare iyo ul taageerta hoose oo ka sameysan taarikada birta. Qaybta iskutallaabta ee jaranjarada sare iyo qaybta iskutallaabta ee stylka hoose ee iligga iyo agagaarkeeda waa afargeesle dhinac dhinac u furan, taarikada birta ahna labada dhinac ee furitaanka ayaa u foorarsanaya. Ilkaha jaranjarada kore iyo tan hoose waxay ka samaysan yihiin saxanno bir ah oo ku laaban labada dhinac ee furitaanka, ballaca iligguna wuu ka weyn yahay dhumucda saxanka biraha.
Ujeedada looxa maqaarku wuxuu ku habboon yahay dayactirka farsamada, gaar ahaan dayactirka gaariga. Waa xasiloon oo lagu kalsoonaan karo oo leh awood wax ku ool ah. Maaddaama xiirashada Jack ay iska leedahay jaakad farsamo, looma baahna in laga walwalo ifafaalaha saliidda soo daatay, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si siman.
4.Qaabka jaakada maqaska
tusaale Awood (tan) Dherer (dherer) Dhererka ugu badan (mm) NW (kg) QTY / CTN (kumbiyuutarada) Cabirka (mm)
Jack Scissor waa nooc ka mid ah kala soocida Jack. Waxaa lagu magacaabaa maqas Jack sababtoo ah qaabkeeda iyo qaabkeeda. Scissor jack waa nooc ka mid ah qalabka wax lagu qaado, kaas oo inta badan loo isticmaalo in lagu jiido laguna taageero baabuurta leh culeyska yaryar sida gawaarida. Waa fudud oo dhakhso badan in la isticmaalo. Waxay ku habboon tahay dayactirka farsamada, gaar ahaan dayactirka baabuurta. Waa xasiloon oo lagu kalsoonaan karo oo leh awood wax ku ool ah.
Hore: Gawaarida Telescopic Haydarooliga
Xiga: Dahaarka Bareega Baabuurka
Battery Powered Haydarooliga Jack
Raadiyaha Haydarooliga Jack
Jack Haydarooliga Yar